Pedro Regis - Aza matahotra ny vesatry ny fitsapana - Countdown ho an'ny Fanjakana
Ilay Vehivavy Tompon'ny fandriampahalemana, 20 aogositra 2020
Ry zanaka malala, aza kivy. Ny lalana mankany amin'ny fahamasinana dia feno sakana, saingy tsy irery ianao. Tiako ianao ary eo anilanao. Mbola lavitra ny lalan-kalehanao. Aza matahotra ny vesatry ny fitsapana. Mitadiava tanjaka amin'ny Eokaristia sy amin'ny Tenin'i Jesosy. Raiso koa ny Appeals-ko, fa amin'izany dia ho lehibe amin'ny finoana ianao. Miantso anao ny Tompoko ary miandry anao amin'ny sandriny malalaka. Mankatoava ary ekeo ny Sitrapon'ny Tompo amin'ny fiainanao. Miondrika am-bavaka. Ny fitaovam-piadiana fiarovanao dia vavaka tso-po. Ireo izay mahatoky am-bavaka dia tsy ho resy mandrakizay. Mangataka anao aho mba hihazona ny lelafon'ny finoanao ho tsara. Na inona na inona mitranga, mijanona mahatoky amin'ny Magisterium marina ao amin'ny Fiangonan'ny Jesosy. Mandrosoa tsy misy tahotra. Ity no hafatra omeko anao anio amin'ny anaran'ny Trinite Masina Indrindra. Misaotra anao namela ahy hihaona aminao eto indray. Mitsodrano anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina aho. Amen. Milamina.
← Luz de Maria - Raiso…